एक रात। हालसालैको रात। म मस्त निद्रामा थिएँ। अचानक घरबाहिर कोही सुँक्कसुँक्क रोइरहेको आवाज आयो। आवाज क्रमशः तीव्र हुँदै गएपछि निदाउन सक्ने स्थिति रहेन। म घरबाहिर आएँ। गेट खोलेँ। आवाज...
कति नेपाली कहाँ–कहाँ लडे?
पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको यसै वर्ष एक शताब्दी पुगेको छ। युरोपका विभिन्न देशमा इतिहासको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन्।
फुकीढल तर अग्लो ज्यान सरासर भित्रिन्छ। साथीहरू जर्यााकजुरुक उठ्छन्। ऊ सरासर गएर कालोपाटीतिर कन्नो फर्काएर ठिङ्ङ उभिन्छ। दुवै हात पखेटाझैं १८० डिग्रीमा फैलाउँछ। र, खुम्च्याउँदै 'बस'को इसारा गर्छ। ओठ खोल्दैन। साथीहरूका डब्लु बेन्चमा एक्कैचोटि छोइँदा ढ्याप्प आवाज आउँछ। ऊ उभ्भेरै…
अभिभावक गुमाउनुको पीडा सायद अरू कुनै पीडासँग दाँज्न सकिँदैन। तीन महिनाअघि मैले बुवा गुमाएँ। त्यो अकस्मात् र अनपेक्षित क्षति मेरा लागि असह्य थियो। हुन्।)
सन्तानलाई पैसा होइन, समय दिऊँ
कुनै काम सफल पार्न काम गर्ने व्यक्तिमा त्यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभव दुवै हुनुपर्छ। सन्तानको लालनपालनमा पनि यो लागू हुन्छ। तर, अधिकांश मामिलामा पहिलोपटक आमाबाबु हुनेसँग यो दुवै हुँदैन। कसैकसैसँग किताबी ज्ञान हुन सक्छ, जो पर्याप्त र व्यावहारिक नहुन सक्छ। संयुक्त…
९५ वर्ष पुग्नै लागेका संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी बिहानीको तातो घाम खोज्दै आँगनमा रहेको सोफामा बसे। अग्ला घर छिचोल्दै घामका किरण आँगनमा छरिएका थिए। सहर यस्तो भइसक्यो, निर्वाध घामका किरण आँगनसम्म आइपुग्न घरका चेपचाप छिचोल्नुपर्छ। उनी त्यही सोफामा बसेर पुरानो काठमाडौं…
काठमाडौं– बाल्यकालमा गीर (लठ्ठीले बललाई हानेर खेलिने) खेलेर हुर्किएका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले अहिलेको लोकप्रिय क्रिकेटसम्म हेर्ने मौका पाए। विश्वभर चलिरहेको क्रिकेट त्यही गीर खेलको विकसित रूपझैं लाग्छ, उनलाई।
धन्न धानेका छन् विभागीयले
चार वर्षअघि चीनको ग्वान्झाउमा भएको १६ औं एसियाली खेलकुदको मार्चपासमा नेपाली सेनाका भारोत्तोलन खेलाडी कमलबहादुर अधिकारीले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए।
आधुनिक एथ्लेटिक्समा महत्वका साथ हेरिने म्याराथन दौड कसरी सुरु भयो होला? उत्तर खोज्दै जाँदा एउटा ऐतिहासिक आहान फेला पर्छ। फैडिपिडेस नामका ग्रिसेली सैनिक युद्धमा विजयको खबर दिन म्याराथनदेखि एथेन्ससम्म दौडिएको सम्झनामा नै म्याराथन दौडको सुरुआत भएको मानिन्छ।